Farmaajo oo rabo inuu ka baxo heshiiskii Dhuusamareeb | Keydmedia
Farmaajo oo rabo inuu ka baxo heshiiskii Dhuusamareeb
Mursal iyo Muudey ayaa la sheegay inay ka shaqeynayaan qorshaha Farmaajo ee fashilinta heshiiska Dhuusamareeb ee arrimaha doorashooyinka dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in Farmaajo uu qorsheynayo inuu ka baxao heshiiskii uu Madaxda Maamullada kula soo galay Dhuusamareeb, isagoo u maraya Gollaha Shacabka oo diidan.
Qoraalka CC Shakuur:
Guddoonka Golaha Shacabka ( guddoomiyaha iyo ku xigeenkiisa 1-aad) oo ay muddo xileedkooda 3 bil ka harsantahay ayaa doonayo in uu muddo kororsi sameysto. Waxeyna oggolaasho ka heystaan Madaxweynaha oo raba in uu heshiiskii Dhuusamarreeb ka baxo. Waa mid laga filayey madaxweynaha iyo guddoonka Golaha-ba.
Waxey doonayaan in ay ansixiyaan qorshihii muddo kordhinta ee uu Guddiga Doorashada soo jeediyey, kaddibna xukuumadda eedda la saaro mooshin gacan taag ahna lagu rido.
Ujeedka ugu wayn ee Guddoonka Golaha Shacabka waa in la burburiyo natiijadii ka soo baxday shirkii Dhuusamarreeb oo ay Soomaalidu iyo beesha caalamka taageereen, gaar ahaan Dowladda Mareykanka iyo Midowga Afrika. Waxey kaloo doonayaan in ay carqaladeeyaan shirka lagu balansanyahay 15-ka Agoosto oo isla Dhuusamarreeb ka dhici doona. Tani waa billawgii dhammaadka Golaha Shacabka. Intii rajada ka lahaydna, maanta ayey ka quusan doonaan oo ay si buuxda u taageeri doonaan shirka Dhuusamarreeb.
Waxaana halkaas ku soo afjarmaya doorasho qof iyo cod ah oo ay shacabka Soomaaliyeed ogaayeen in ay aheyd oraah xaq ah, laakiin marin habaabin loola jeeday. كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ‎.
Shaki iigama jiro in shirka Dhuusamarreeb uu guulaysanayo, Waxaanse ka cabsi qabaa in xildhibaanno badan oo fursad doorasho soo heli kara ay ku lug go’aan marinka qaldan ee Mursal iyo Muuddeey. Haddii fawdaddii iyo gacan taag ku ridistii beenta ahayd loo laabto, waa qof walba taagtii iyo taageeradii, wixii xasilooni dari iyo qalaalse ah ee uu dalku galo masuuliyadeeda Madaxweynaha, Mursal iyo Muudeey ayaa dusha u ridanaya.
0 Comments Topics: doorashada farmaajo gollaha shacabka
11 Luulyo 2020 waxaa Magaalada dhusamareb ka furmay shirka 5ta Madaxweyne ee Dowlad Goboleedyada (DG) Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka (DF). Ajendaha shirka wuxuu ahaa qabashada doorashada hay’adaha dastuuriga ee Soomaaliya oo kala ah Barlamaanka Federaalka (BF) iyo Madaxweynaha JFS ka hor dhammaadka muddo xileedka labadaas hay’adahood oo ku beegan 26da Disember 2020 iyo 7da Febraayo 2021.
Wararkii ugu dambeeyay Shirka Muqdisho
Warar 17 September 2020 14:33
Xasan Sh: Farmaajo Naag la furay ayuu ilmo ka dhalayaa
Warar 16 September 2020 18:38